Pnpkhabar.com | Popular Nepali Portal कोभिड महामारीको केन्द्रविन्दु बन्दै युरोपः डब्लुएचओ - Pnpkhabar.com
जेनेभा, कात्तिक २० : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का वरिष्ठ अधिकारीहरूले युरोपमा गत महिना कोरोना भाइरस संक्रमण ५० प्रतिशतभन्दा बढेको बताएका छन्।
खोपहरूको पर्याप्त आपूर्तिका बाबजुद युरोप महामारीको केन्द्रविन्दु बनेको उनीहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
‘त्यहाँ प्रशस्त खोप उपलब्ध हुन सक्छ तर खोपको खपत बराबर मात्रामा हुन सकेको छैन। यसले समस्या निम्त्याएको छ,’ डब्लुएचओका आपतकालीन प्रमुख डा. माइकल रायनले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भने। उनले खोपहरूमा रहँदै आएको अन्तर बन्द गर्न युरोपेली अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका छन्।
‘संवेदनशील समूहका मानिसलाई बाहेक अरूलाई बुस्टर डोज दिन हतार गर्नु पर्दैन,’ टेड्रोसले भने। उनले खोप निर्माताहरूसँग कोभ्याक्स आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिन आह्वान गरेका छन्। गरिब देशले कोभिड–१९ खोपको १ प्रतिशतभन्दा कम प्राप्त गरे पनि अफ्रिका र दक्षिणपूर्वी एसियामा गत साता ९ प्रतिशत संक्रमण घटेको पाइएको छ।
यसअघि बिहीबार डब्लुएचओको ५३ देशका युरोप क्षेत्र निर्देशक डा. हान्स क्लुगेले बढ्दो संक्रमित संख्या ‘गम्भीर चिन्ताको विषय’ भएको बताएका थिए। ‘युरोप महामारीको केन्द्रविन्दुमा फर्किएको छ जहाँ हामी एक वर्षपहिले थियौं,’ डब्लुएचओको कोपेनहेगन कार्यालयका क्लुगेले भने।